कोरोना भाइरस : भारत-नेपाल सिमामा बढ्यो सतर्कता : एयरपोर्टमा अलर्ट - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारकोरोना भाइरस : भारत-नेपाल सिमामा बढ्यो सतर्कता : एयरपोर्टमा अलर्ट
January 29, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
कालेबुङ, 29 जनवरी
कोरोना भाइरसले चीन र नेपाललाई प्रभावित गर्नथालेदेखियतासिमा क्षेत्रमा सतर्कता अप्नाउन थालिएको छ। नेपाल-बारत सिमा नजिक बाघडोगरा एयरपोर्टमा चीनबाट आएका हरेक यात्रीलाई विशेष निरिक्षण हुन थालेको छ। बागडोगरा एयरपोर्टका निदेशक सुब्रमणि पी.ले यात्रीहरूलाई सतर्क रहन एयरपोर्टमा डिस्प्ले बोर्डसमेत लगाइएको जनाएका छन्।
‘चीनबाट आएका यात्रीहरूले एयरपोर्ट अथोरिटीलाई आफ्नो स्वास्थ्यबारे रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘भाइरस संक्रमित यात्रीबारे कुनै शंका भएमा उनीहरूको आवश्यक स्वास्थ्य जाँच पनि गरिनेछ।’
पश्चिम बंगाल सरकारको स्वास्थ्य विभागका दार्जिलिङ इकाई पनि कोरोना भाइरसबारे सतर्क रहेको मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओएच) डा. प्रलय आचार्यले जनाएका छन्।
‘विशेषगरी नेपाल-भारत सिमा क्षेत्रलगायत वरिपरिका क्षेत्र खोरीबारी, मिरिक, सुखेपोखरी खण्डमा विशेष सतर्कता अप्नाइको छ,’ आचार्यले भनेका छन्। आचार्यले सीमापारीबाट आउने हरेक व्यक्तिमा विभागीय दृष्टि टिकेको छ। चीनबाट नेपाल फर्किएका यात्रीमा कोरोना भाइरस भेटेदेखि यता चीन, भूटान, बंगलादेश र नेपालका सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अप्नाइएको आचार्यले जनाएका छन्।
नर्थ बंगाल मेडिकल कलेज एवंअस्पतालमा कोरोना भाइरस सम्बन्धित छुट्टै वार्ड बनाइएको छ। यद्यपि सिलगढी र नेपाल-भारत सिमा क्षेत्रमा कसैलाई पनि भाइरस संक्रमित भएको खबर छैन। भारतको छिमेकी देश चीन र नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेपछि भारत सरकार र बंगाल सरकारले ‘चिकन नेक’ क्षेत्रमा सतर्कता शुरु गरेको आचार्यले बताएका छन्।
‘नजिकै नेपाल रहेकोले र नेपालबाट भारत आउनेजाने क्रम अधिक रहेकोले सीमा क्षेत्र वरिपरि भाइस संक्रमित यात्री जाँच्न प्यारामेडिकल टिमलाई तैनाथ गरिएको छ,’ डा. प्रलय आचार्यले जनाएका छन्।